PAISLEY TERRIER DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Paisley Terrier Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Deygii Paisley Terrier ee bakhtiyey
Xayawaanka Skye Terrier
Muuji Skye Terrier
The Paisley Terrier wuxuu la mid ahaa noocyada kale ee yaryar ee Terrier-ka sida kan casriga ah Yorkshire Terrier qaraabadiisa ah Skye Terrier . Waxay haysteen jaakado aad u dheer, silky oo indhahooda daboolay oo dhulka jiiday, lugaha gaagaaban, jidh dheer, iyo madax yar. Sankooda ayaa xoogaa ka yaraa kuwa kale ee argaggixisada, iyaga oo siinaya weji dhoola cadeynaya. Sababtoo ah daamanka ballaaran, waxaa loo tababaray oo loo adeegsaday in lagu dilo jiirka. Timaha inta badan indhahooda qariya badanaa waa la isku xiraa ama la jarjaray si loogu oggolaado inay wax arkaan.
Isaga oo ka dabacsan noocyada kale ee Terrier-ka, Paisley Terrier-ka waxaa lagu yaqaanay inuu kalgacal iyo kalgacal u qabo aadanaha, gaar ahaan milkiilaha. Kuma fiicnayn jileec ahaan marka loo eego kuwa kale ee khatarta keena, laakiin waxay raaci jireen amarrada markii loo baahdo. Iyada oo ay weheliso waxoogaa caajis ah marka loo eego eeyaha kale ee yaryar, Paisley Terrier-ka waxaa lagu yaqaanay inuu eey ka gardarro yar yahay eeyaha kale guud ahaanna wuxuu ahaa mid adeeca oo dib u dhigay. Waxaa sidoo kale lagu yaqaanay inay qabaan walwal kala tag. Markii keligood la daayo muddo aad u dheer ayay ciyi doonaan si aan dhammaad lahayn waxayna noqdeen kuwo dagaal badan oo aan milkiilahoodii la joogin, taasoo keentay waxa aan hadda ugu yeerayno Cudurka Dog yar . Waxay ahaayeen eey yar oo dayactira.
Yar 8-15 rodol (3.6-6.8 kg)
Dhexdhexaad 15-35 rodol (6.8-15.8 kg)
Sababtoo ah noocani waa dabar go'ay, ma jiraan diiwaanno muujinaya dhibaatooyinka caafimaad ee Teris Paisley Terrier.
Eeyadan waxaa lagu yaqaanay inay dib u dhigen oo ka xasilloonaayeen inta badan argagaxisada kale taasoo macnaheedu yahay inaysan u baahnayn jimicsi ka badan kuwa kale ee firfircoon. Weliba waxay u baahnaan lahaayeen socod joogto ah iyo dibedda sida eey kasta oo kale waxayna u baahnaan lahaayeen meel ay bannaanka ku ciyaaraan.
Ma jiraan wax caddeyn ah oo ku saabsan cimrigooda inkasta oo ay u badan tahay inay noolaan lahaayeen illaa 10-14 sano.
Ma jiraan wax caddeyn ah oo ku saabsan xajmiga qashinkooda in kastoo ay u badan tahay inay ku dhici lahaayeen 1-5 eey.
Eeyahaani waxay ahaayeen astaamaha asturnaanta. Sababtoo ah joodariyadooda dheer, waxay u baahdeen in si joogto ah loo qurxiyo, mararka qaarkood maalin kasta. Waxay lahaayeen timo dhaadheer oo dhulka gaadha, si fududna u keena guntin iyo isku-duubni. Milkiileyaashu waxay u baahnaan lahaayeen inay si joogto ah u dhaqdaan jaakadooda oo ay u cadayaan illaa ay kaftankoodu u siman yihiin. Baahida ay u qabaan caruurnimadooda aadka u daran ayaa laga yaabaa inay ka qayb qaadatay baabi'intooda.
The Paisley Terrier wuxuu ka soo farcamay awowgiis Skye Terrier taas oo la mid ah muuqaal ahaan iyo dabeecad ahaanba. Diiwaanada laga soo qaaday 1440 waxay adeegsadeen erayga terrier, iyagoo noo sheegaya in Skye Terrier uusan ahayn kii ugu horreeyay kooxdan in kastoo aan hayno caddeyn yar oo ka horreysa Skye Terrier. Luqadda Faransiiska 'Terrier' waxaa loo tarjumay weedha 'Chien Terre,' oo dib loogu tarjumay 'Eyga Dhulka'. Tani waxay ku habboon tahay jaangooyooyinka sidii loo soo saaray loona adeegsaday qabashada jiirka iyo jiirka yar ee dhulka ku jira. Waxaa jira diiwaanno muujinaya in kooxdu ay jirtay qarnigii 10aad waxayna khubaradu sheegeen in ay si fiican u joogeen xilligaas ka hor. Hadhaaga waxa loo malaynayo inuu yahay Skye Terrier ama eey u eg Terrier-ka ayaa laga helay goob qadiimiga qadiimiga ah oo ku taal Scotland taas oo caddeysay in argagaxyadu ay jireen xilliyadii Roman-ka ee England iyo Scotland labadaba. Terrier-ka waagaas ayaa loo isticmaali lahaa si la mid ah tan maanta, ugaarsashada xayawaanka yaryar ee ka qodda Dhulka hoostiisa.
Waxba looma oga xaqiiqda sida ay udhasheen jaangooyooyinku, malaha maxaa yeelay in badan oo beeralaydii iyaga soo korsaday waxay ahaayeen dad aan waxna qorin waxna qorin wax diiwaan ahna laguma haynin eeyo ey xilligaas. Qaarkood waxay yiraahdaan 'terriers' waxaa markii uguhoreysay soo adeegsaday qabiilooyinka Celtic halka kuwa kale ay u maleynayaan inay ka yimaadeen qabiilooyinka Celtic isla goobtaas. Intooda badani waxay isku raacsan yihiin in argagaxisadu ay ka soo bilaabatay jasiiradaha Ingiriiska maadaama laga yaqaanay meel ka baxsan Ingiriiska 200 oo sano ka dib. Kuwo badan waxay u maleynayaan in argaggixisada ay ka soo farcameen noocyada Ingiriiska sida Scottish Deerhound , Canis Segusius, iyo Irish Wolfhound inkastoo tan aan waligeed la cadeyn. Beeraleydu waxay doorbidaan jaangooyooyin yaryar awoodeeda ugaarsi oo eryanaya baryo yar yar oo ka fog dalagooda iyo xoolahooda. Tani waxay ka hortagtay xanuun ku dhici kara xoolaha sidoo kale waxay ka hor istaagtay jiirka yar yar inay cunaan ama baabi'iyaan dhirta. Sababtoo ah dadku waxay ahaayeen dad sabool ah oo gaajaysan inta lagu jiro waqtigan, jaangooyooyinku waxaa si adag loogu haystaa inay yihiin eeyo shaqeeya ee looma haynin xayawaan gurijoog ah ama wehel ah. Dhaqan guud ayaa ahaa in berriga la dhigo foornada iyo otter-ka ama bajaajta si ay terrier-ku u caddeeyaan inay mudan tahay inuu noqdo eey shaqeeya. Haddii Terrier-ka uu dilay xayawaanka kale, waxaa qaatay ninka beeraleyda ah si uu u noqdo eey shaqeeya. Waqtigan xaadirka ah ee la isticmaalay waxay lahaayeen jaakado qoyan, oo ka duwan Skye Terrier-ka oo lahaa jaakad dhogor badan. Markabka 'Skye Terrier' waxaa laga helay jasiirad ku taal woqooyiga Highlands ee jasiiradda Hebrides. Noocani wuxuu lahaa jir dheer oo waxay u badan tahay inuu ku gudbay Corgis oo waliba degenaa jasiiradda. Skye Terriers waxaa loo haystay eey shaqeeya iyo eey wehel ah, gaar ahaan Scotland halkaas oo ay ka noqotay mid ka mid ah noocyada ugu caansan dalka intii lagu jiray 1800's. Muddo yar ka dib waqtigaan, kacaankii warshadaha wuxuu ka dhacay Scotland, isagoo si tartiib tartiib ah u soo afjaray dalabkii eeyaha yar yar ee shaqeeya. Hadda Skye Terriers waxaa loo soo saaray eeyo wehel ah mararka qaarna waxay ula safraan milkiilayaashooda warshadaha si ay u dilaan jiirka yar yar ee dhismayaasha ku jira. Sababtoo ah waxay hadda u sooceen wehelnimo, dadku waxay door bidayeen eeyaha lahaa jaakadaha muuqaalka dhalaalaya ee soo jiidashada badan.
Bartamihii qarnigii 19-aad, Skye Terrier-ka waxaa lagu soo barbaaray in ka badan illaa heer ay u caan baxday Clydesdale (oo ku taal magaalada Clydesdale) ama Paisley Terriers (oo ku taal magaalada Paisley, oo u dhow Glasgow). Labada magac (Clydesdale iyo Paisley Terrier) waxay horay iyo gadaalba u dhexmareen caan u ahaa dhammaadkii 1800.
Waqtigaas oo Clydesdales uu caan noqday, bandhigyada eeyaha sidoo kale waxay bilaabeen inay noqdaan isboorti caan ka ah Yurub. Marka loo barbardhigo 'Skye Terriers', Clydesdales waxaa doorbiday garsoorayaasha badankood sababtoo ah jaakadaha dhaadheer ee dhaadheer. Sababtaas awgeed, waxaa loo soo saaray inay sii xoojiyaan dhererka iyo tayada timahooda labadaba. Marka laga reebo bandhigyada eeyga, Paisley Terrier waxaa inta badan doorbiday haween aan rabin eyga toy-ga.
Kacaankii Warshadaha wuxuu socday 1800-dii oo dhan, isagoo keenaya soogalootiga inay u safraan dalal kale, iyagoo keenaya Paisley Terriers iyaga oo ugu dambeyntiina la laalaabay terriers kale, iyagoo bedelay muuqaalka Clydesdales markale. Qaarkood waxaa loo soo saaray inay yeeshaan gadaal dherer gaaban halka kuwa kalena mar labaad loo soocay si ay u sii wataan jaakadaha dhaadheer ee xarka leh.
buluug cidhiidhi ah oo lagu qasay collie xadka
Ugu dambeyntii, eey caan ah oo caan ah oo la yiraahdo Huddersfield Ben wuxuu noqday halbeegga loogu talagalay 'Paisley Terriers', isagoo ka dhigaya noocyada magaalooyinka kale in loogu yeero wax kale gebi ahaanba. Tani waxaa ku jiray nooc ka mid ah kuwa casriga ah ee maanta Yorkshire Terrier iyo Lancashire Terrier . Labada eeyba sidoo kale waxay lahaayeen faracyo kaladuwan iyaga kadib sidoo kale.
Noocyadan cusub ee laga soo saaray waddamada kale iyo magaalooyinka, waxaa yaraaday dalabkii loo qabay 'Paisley Terrier'. Waqti ka dib, Yorkshire Terrier wuxuu ka awood batay noocyada kale ee Terrier-ka welina wuxuu sii wadaa inuu caan noqdo maanta. Paisley Terrier waxaa la soo saaray ilaa horaantii 1900's laakiin ma jiraan wax diiwaan ah oo ku saabsan isirkan ka dib Dagaalkii Koowaad ee Adduunka.
Liiska Noocyada Eyga Dhimmay
pictures of eeyaha shaybaarka madow
diiwaanka eyga waqooyiga america ee nadiifka ah
chow chow madow iyo caddaan
isku darka cardigan welsh corgi dachshund
Jarmalka adhijir terrier mix puppy